Zụta Echiche YouTube | Nlele YouTube maka vidiyo
Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta Nlele YouTube?
Na-enye gị nkwenye maka uto organic.
Na-agba ndị ọzọ ume ka ha kirie vidiyo gị.
Speedsọ nnyefe: 1,000 ruo 50,000 echiche / ụbọchị.
100% nchekwa & nnyefe e kwere nkwa.
Nsonaazụ na-amalite na awa 24-72.
Gbasaa echiche gafee otutu vidiyo (Min. Echiche 1,000 n'otu vidiyo). Dezie echiche 10,000 & kewaa vidiyo 1 gaa na 10.
Kedu ihe mere ị ga-eji zụta echiche YouTube ka ọ bụrụ #1
Vidio ntanetị ugbu a na-achịkwa ụwa nke mgbasa ozi mmekọrịta. Anyị nwere ike ikwu na vidiyo na-enwe mmetụta karịa ọdịnaya mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ bụ ya mere azụmaahịa ịntanetị ọ bụla ga-eji iji YouTube dị ka ụzọ isi zụọ ahịa.
Zụta echiche YouTube bụ otu n’ime ụzọ kachasị dị irè iji kwalite vidiyo gị. Chazụta echiche YouTube mgbe ejikọtara ya na usoro ndị ọzọ dị irè dị ka njiri vidiyo na ịzụta mgbasa ozi YouTube, ga-enye vidiyo gị nkwalite ziri ezi. Nke a bụ ụfọdụ uru ịzụta echiche YouTube iji bulie vidiyo gị.
Egwu di elu na YouTube na Google Search Engines: Otu eziokwu a na-eleghara anya ọtụtụ oge bụ na echiche YouTube nwere mmetụta siri ike na ọkwa ọchụchọ vidiyo gị. Mgbe ịzụtara echiche YouTube maka vidiyo gị, ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nlele na vidiyo gị si otú a na-enye vidiyo gị ka itinye ọkwa dị elu na ndepụta vidiyo YouTube nke nye ndị ọrụ.
Conversbawanye Mkparịta ụka na CTA: Yingzụta echiche YouTube nwere ike ime ka ọnụọgụ nke nje na-adọta na vidiyo gị mụbaa. Mgbe vidiyo gị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọ ga-agba ndị ọzọ na-ekiri ekiri ume ka ha na-elele gị video ma pịa njikọ ị nwere ike na nkọwa ahụ, si otú ahụ na-abawanye uru nke vidiyo gị.
Na-enye Gị Oge Focustụgharị Anya Maka Ihe Ndị Ọzọ: Site na ịzụta ihe ngosi YouTube, ị na-eburu ibu dị arọ n’ubu gị. Inwekwu oge iji gbado anya na atụmatụ ndị ọzọ dịka ogo ọdịnaya gị yana mpaghara ndị ọzọ nke mkpọsa ahịa gị. Notkwesighi ichegbu onwe gị banyere ndị ọrụ na-elele ọwa gị. Echiche ị zụrụ ga-elekọta nke ahụ maka gị.
Mee Nlele Okike Organic: Ndị mmadụ nwere echiche ndị mmadụ na-ekwukarị na "Ọ bụrụ na ọ nweghị onye ọzọ na-ele vidiyo, gịnị kpatara m ga-eji nwee ike iwepu oge m ma lelee ya?" Yourbawanye echiche gị na-egosi na vidiyo gị bara uru ma ọ bụ ya mere ọ ga-adọta ndị na-ege ntị nke ga-enye vidiyo gị ohere. ka egwuri egwu n’uju.
Iwulite Nkwenye nke Gị: Mgbe mmadụ hụrụ vidio gị nwere ọtụtụ echiche, ha na-agba ume ma na-amanye ka ha lee ma gee ntị na ozi gị. Nke a na-aga n’ihu n’iwulite aha gị dị ka onye na-emepụta ọdịnaya nwere mma. Nkwanye ugwu gị na-adabere na ama ama gị na echiche YouTube gị na-enye gị ụdị ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta asọmpi gị, atụkwasịla uche naanị na ọdịnaya gị naanị. Ikwesiri ịkwalite ọwa gị site na ijikọta usoro dị iche iche na ịzụta echiche YouTube bụ otu n'ime ihe ndị ahụ nwere ike inyere gị aka ịga nke ọma na YouTube. Kedu ihe ị na-eche? 'Na YouTube, Ihe Ọ bụla Nke Abụọ'.
Kedu ihe kpatara ọtụtụ mmadụ jiri zụta echiche YouTube?
Imirikiti ndị ahịa anyị na-azụta echiche n'ihi na ha nyere nkwenye vidiyo ha ozugbo iji gosi na ọ bara uru ikiri. Ọzọkwa, ọ na - enyere aka ịbawanye ọkwa ọchụchọ YouTube na Google ha, yabụ na - ebute okporo ụzọ ndị ọzọ.
Mgbe mmadụ nyochara okwu gbara ọkpụrụkpụ nke gosipụtara vidiyo gị na nsonaazụ ọchụchọ, mana ha nwere ike ịhụ mmadụ ole na ole lere ya, ha na-elegharakarị ya anya ma gaa na vidiyo nwere oke echiche. Ọbụlagodi na vidiyo gị ga - enwe ihe mmụta karị, ma ọ bụ nwee echiche ọzọ, ọ ga - atụfu ọtụtụ ọghọm ndị nwere nsị Organisation n'ihi na ndị mmadụ nwere echiche nke "Ọ bụrụ na onweghị onye ọzọ na - ele ya, ọ gaghị abụ ezigbo vidiyo."
N’ihi nke a, ịzụta echiche, ihe na-amasị na ihe na-ekwu maka vidiyo gị ga-eme ka ọ bido inweta nkwanye ugwu o kwesịrị!
Achọrọ m karịa echiche 1 nde. Can nwere ike ịnye karịa?
Ee, anyị nwere ike ịnapụta ihe karịrị nde 1 nde!
Anyị na-enye echiche nde 1 dị ka ọnụọgụ kachasị mmadụ nwere ike ịzụta na ibe a maka ọtụtụ ebumnuche, mana ọ dịghị nke metụtara ikike anyị ịnapụta ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta 1 nde YouTube, ma ọ bụ ọbụlagodi 100 nde, anyị nwere ike ịnapụta ha, mana ọ ga-efu ọnụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ karịa nde 1 nde YouTube, biko kpọtụrụ anyị ma kọwaa ọnụọgụ mmasị ị nwere ịzụta. Anyị ga-azaghachi na ọnụahịa ọdịnala.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nata iwu m?
Mgbe ịzụtara echiche YouTube n'aka anyị, nsonaazụ na-ebido ịpụta na vidiyo gị n'ime awa 24-72 mgbe edobere ihe gị wee pụta nsonaazụ ya kwa ụbọchị.
Anyị na-ebuga na ọsọ nke ihe dịka 1,000 ruo echiche 50,000 kwa ụbọchị. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị nye iwu 1,000 echiche, ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-ewe ruo awa 72 iji bido ma gbakwunye ụbọchị 1 iji wepụta ya zuru ezu. Anya ndị ọzọ ịzụrụ, ọ ga-ewe oge iji wepụta usoro gị zuru ezu.
E tinyela Echiche YouTube na ụgbọ ibu gị.
Ndị debanyere aha 50 ($ 20) Ndị debanyere aha 100 ($ 30) Ndị debanyere aha 300 ($ 45) Ndị debanyere aha 500 ($ 60) Ndị debanyere aha 1000 ($ 100)
Mmasị nke 100 ($ 13.50) Mmasị nke 200 ($ 20) Mmasị nke 300 ($ 25) Mmasị nke 600 ($ 40) Mmasị nke 1200 ($ 70) Mmasị nke 2500 ($ 140) Mmasị nke 5000 ($ 270) Mmasị nke 10000 ($ 530) Mmasị nke 15000 ($ 790) Mmasị nke 20000 ($ 1050) Mmasị nke 30000 ($ 1550)
Nkwupụta 10 ($ 20) Nkwupụta 20 ($ 35) Nkwupụta 30 ($ 50) Nkwupụta 50 ($ 80) Nkwupụta 100 ($ 140)